सबै थ्री फेज मिटरलाई स्मार्ट बनाउने तयारी - ePosttimes
Homeसमाचारसबै थ्री फेज मिटरलाई स्मार्ट बनाउने तयारी
सबै थ्री फेज मिटरलाई स्मार्ट बनाउने तयारी
१५ भाद्र २०७६, आईतवार ०९:०२ समाचार 0
काठमाडौं । सरकारले सबै थ्री फेज मिटरलाई स्मार्ट बनाउने भएको छ । औद्योगिक र व्यवसायिक प्रयोजनमा थ्री फेज लाइन जोडेका ग्राहकको मिटर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले स्मार्ट बनाउन लागेको हो ।
हाल यस्ता मिटरको संख्या ७० हजार रहेको अनुमान छ । आगामी २ वर्षभित्रै सबै थ्री फेज मिटरलाई स्मार्टमा रुपान्तरण गर्न काम सुरु भइसेकेको प्राधिकरणको ग्राहक तथा वितरण सेवा निर्देशनालयले जनाएको छ ।
हाल प्राधिकरणका मिटरहरु स्मार्ट नहुँदा समय–समयमा उद्योगी/व्यापारी र प्राधिकरणबीच महसुल विवाद उत्पन्न हुने गरेको छ । प्राधिकरणले खपतका आधारमा बिजुलीको बिल काट्ने गरेको दावी गरे पनि व्यवसायीहरुले अन्याय हुने गरी ‘बिलिङ’ भएको आरोप लगाउने गरेका छन् ।
औद्योगिक तथा व्यवसायिक ग्राहकले प्रयोग गर्ने बिजुलीको खपत भइरहेको समयको अनुगमन र त्यसको वास्तविक तथ्यांक संकलन गर्न यो प्रविधि सहयोगी हुनेछ ।
अब कुन उद्योगले कुन समयमा कति परिमाणमा विजुली खपत गर्‍यो भन्ने सम्पूर्ण तथ्यांक रहने गरी स्मार्ट मिटर जोड्न सुरु गरिएको हो । यसबाट प्राधिकरणको महसुल असुलीमा पनि वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ । यस्ता थ्री फेज मिटरलाई स्मार्टमा बदल्दा लाग्ने खर्च प्राधिकरणले नै बेहोर्नेछ ।
प्राधिकरणको ग्राहक तथा वितरण सेवा निर्देशनालयका प्रमुख तथा उपकार्यकारी निर्देशक हरराज आचार्यले १० हजार टीओडी मिटरमा पनि स्मार्ट प्रविधि जडानको काम सुरु भइसकेको जानकारी दिए । टीओडी मिटरलाई पनि प्राधिकरणको केन्द्रीय सर्भरमा जोड्ने गरी काम भइरहेको उनले बताए ।
हाल प्राधिकरणले काठमाडौंका केही क्षेत्रमा घरायसी ग्राहककोमा पनि स्मार्ट मिटर जोड्न तयारी गरिरहेको छ । काठमाडौंको पहिलो परियोजना सफल भएपछि क्रमशः देशभर नै यो योजनालाई लागू गर्दै लैजाने योजना बनाइएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए ।
यो आयोजना अन्तर्गत पहिलो चरणमा महाराजगञ्ज र रत्नपार्क क्षेत्रमा ९८ हजार ग्राहकको घरमा स्मार्ट मिटर जोडिनेछ । प्राधिकरणको आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयका अनुसार कम्पनीले स्मार्ट मिटरको ‘डाटा सेन्टर’ पनि स्थापना गर्नेछ । त्यही डाटा सेन्टरबाट स्मार्ट मिटरिङ सिस्टम सञ्चालन हुनेछ । स्मार्ट मिटर प्रयोगमा आएपछि विजुली चुहावट घट्ने र बक्यौता पनि नरहने प्राधिकरणका कार्यकारी घिसिङ बताउँछन् ।
के हो स्मार्ट मिटर ?
स्मार्ट मिटर भनेको एक प्रकारको विद्युतीय उपकरण हो । यो उपकरण टु वे कम्यूनिकेसन अर्थात दोहोरो सञ्चार प्रणालीमा आधारित हुन्छ ।
ग्राहकले खपत गरेको बिजुलीको तथ्यांक ‘डाटा सेन्टर’मा हरेक पलमा आउने र त्यसको बिलिङ लगातार भइराखेर ग्राहकसम्म पठाउने गरी यो प्रणालीमा जडान हुन्छ । यस्तो डाटा रेडियो फ्रिक्वेन्सीमा आधारित भएर सञ्चार गरिन्छ ।
प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रणालीले हर समयमा त्यस्ता स्मार्ट मिटरको मनिटरिङ गरिरहेको हुन्छ । उपभोक्ताले विल तिरेको/नतिरेको पनि प्राधिकरणले कम्प्युटरमै बसेर हेर्न सक्छ ।
विकसित मुलुकहरुमा स्मार्ट मिटरको प्रयोग बढिरहेको छ । यस्तो मिटर जडान गरेपछि उपभोक्ता र प्राधिकरण दुवैलाई सजिलो हुनेछ । स्मार्ट मिटर डिजिटल डिस्प्लेयुक्त हुने भएकाले उपभोक्ताले विना झन्झट विजुली खपतका तथ्यांक हेर्न सक्छन् ।
के फाइदा ?
स्मार्ट मिटरिङ लागू भएपछि विद्युत प्राधिकरणमा बिजुली खपतको तथ्यांक ‘रियल टाइम’ मा आउँछ । उपाभोक्ताले पनि दैनिक आफ्नो बिल कति उठिरहेको छ भनेर मिटरमै हेर्न सक्छन् । दैनिक कति बिजुली उपयोग भइरहेको छ भन्ने विवरण प्राधिकरणमा पनि आउँछ भने उपभोक्ताले मिटर हेरेरै जानकारी लिन सक्छन् ।
अहिले प्राधिकरणका कर्मचारीहरु बिजुलीको बिल लिएर ग्राहकको घर–घरमा जान्छन् । यो व्यवस्था निकै झन्झटिलो र खर्चिलो छ । यसका लागि हजारौं मिटर रिडरहरु खटाउनुपर्ने अवस्था छ । रिडरहरुलाई पनि घर–घरमा पुगेर मिटर रिड गर्न सजिलो छैन ।
कतिपय मिटर रिडरहरु नै मिटर बिगारेर बिजुली चोरीमा संलग्न हुने पनि पाइन्छ । किनभने हरेक ग्राहकको बिजुली खपत र बिलिङको डाटा पल–पलमा प्राधिकरणको डाटा सेन्टरमै आउँछ । यदि स्मार्ट मिटर सबै ठाउँमा लगाउन सक्ने हो भने प्राधिकरणलाई यति मटिर रिडिङमा जनशक्ति नै चाँहिँदैन । पिक आवरमा लोड म्यानेजमेन्ट पनि सहज बन्छ ।
33000cookie-checkसबै थ्री फेज मिटरलाई स्मार्ट बनाउने तयारीyes
नगरकाे असहयाेगपछि डेंगु नियन्त्रण टाेली फिर्ता
‘यात्रा’पछि मलिकाको दोश्रो फिल्म कुन ?
सिटिजन लाईफ इन्स्योरेन्स धरानमा खैलाबैला, सामाजीक कार्य गर्ने नाममा भानुचोकमा भोट मागेको आरोप (posttimes) (6,626)
हतुवागढीको मुख्यमन्त्री ग्रामिण सडक योजना निर्माणमा ठेकदारको लापार्वाही, अन्य योजनाहरु भीडको चिण्डो यता न उति (posttimes) (5,884)
हतुवागढ़ी गाउँपालिकाले कोरोन भाइरस रोकथाम राहतकोष स्थापना गर्यो, सीमाक्षेत्रमा कडा निगरानी गरिने (posttimes) (5,094)
कोरोना भाइरसबारे थाहा पाउनु पर्ने ९ तथ्य सामग्री यस्तो छ (posttimes) (3,889)
रुँदै बिदा गरिदै नाटक ‘बसाइँ’ (posttimes) (3,761)
अघिल्लो खवरहरु Select Month June 2022 (13) May 2022 (34) April 2022 (6) March 2022 (4) February 2022 (14) January 2022 (6) December 2021 (3) November 2021 (3) October 2021 (2) September 2021 (2) August 2021 (6) July 2021 (14) June 2021 (3) May 2021 (16) April 2021 (12) March 2021 (15) February 2021 (12) January 2021 (12) December 2020 (5) November 2020 (13) October 2020 (19) September 2020 (33) August 2020 (41) July 2020 (28) June 2020 (35) May 2020 (113) April 2020 (157) March 2020 (89) February 2020 (42) January 2020 (36) December 2019 (38) November 2019 (54) October 2019 (29) September 2019 (7) August 2019 (6) July 2019 (12)